ကျား၊ မကွဲပြားမှု၊ အတန်းအဆင့်နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်အလယ်တန်းအဆင့်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုအပေါ်အထီးကျန်မှုအခန်းကဏ္ ((၂၀၁၇) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
Lawal, Abiodun Musbau နှင့် Erhabor တနင်္ဂနွေ Idemudia ။
ဆယ်ကျော်သက်နှင့်လူငယ်များ၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ် (2017): 1-9 ။
လေ့လာမှုတွင်လိင်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုအပေါ်ခွဲခြားမှုကိုခွဲခြားပြီးအလယ်တန်းကျောင်းမှကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုကိုရှင်းပြရာတွင်အထီးကျန်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၏ပါဝင်မှုကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အသက် ၁၃ နှစ်မှ ၂၁ နှစ်အကြားရှိယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအလယ်တန်းကျောင်းသား ၃၁၁ ယောက်၏အဆင်ပြေသောနမူနာတစ်ခု (M = 15.61, SD = 1.63) တွင်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်အထီးကျန်မှု၊ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုတို့ပါ ၀ င်သည့်ကဏ္crossပေါင်းစုံလေ့လာမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Hierarchical ဆုတ်ယုတ်မှုကိန်းဂဏန်းများအရအထီးကျန်ဆန်မှုနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှစ်မျိုးလုံးသည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုမြင့်မားသောရမှတ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်အထက်ပြုမှုအဆင့်ကိုသိသိသာသာဖြစ်စေသည်။ အထီးအလယ်တန်းကျောင်းမှကလေးများသည်အမျိုးသမီးများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုပိုမိုမြင့်မားကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများသည်အတန်းတက်ချိန်တွင်အတန်းအဆင့်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားပေးမှုအပေါ်သိသာထင်ရှားသောလွှမ်းမိုးမှုမရှိသော်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများမြင့်တက်လာသည်။ ကျယ်ပြန့်သောလိင်ပညာရေးနှင့်ကလေးသူငယ်များအားကောင်းမွန်စွာကြီးပြင်းနိုင်ရန်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုအထူးအလေးထားသောမိဘနှင့်ကလေးဆက်သွယ်ရေးကိုအထူးအလေးပေးသောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်အကြံပြုပါသည်။
keywords: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, အင်တာနက်စွဲလမ်း, အထီးထီးနေခြင်း, အလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေ, နိုင်ဂျီးရီးယား
ကျောင်းသားများကိုစနစ်တကျခံစားခကျြကိုထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုပေါ်ပဲ့ထိန်းမထားဘူးဆိုရင်အလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေအကြားအလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးအများနှင့်အလိုဆန္ဒများနောက်ဆုံးမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive မှဖြစ်ပေါ်စေမည်။ Herkov အတွက်မှတ်ချက်ပြုထားသကဲ့သို့ (2016 Herkov, အမ် (2016) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲဆိုတာဘာလဲ psyche ဗဟို။ ရယူရန်သြဂုတ်လ 10, 2017 မှ https://psychcentral.com/lib/what-is-sexual-addiction/ [Google Scholar]), အမျိုးသားလိင်စွဲလမ်းအပေါ်ကောင်စီနှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ဇွဲနှင့်မြင့်တက်ပုံစံများမိမိကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများမှအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များတိုးပွားလာနေသော်လည်းထွက်ပြုမူမြားတှငျပါဝငျခွငျးအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲသို့မဟုတ် compulsive သတ်မှတ်ပါတယ်။ Kalichman နှင့် Rompa (1995 Kalichman, SC, & Rompa, D. (1995) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့် compulsivity စကေး: ယုံကြည်စိတ်ချရ, တရားဝင်မှုနှင့် HIV အန္တရာယ်အပြုအမူကိုခန့်မှန်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်, 65, 586–601.10.1207/s15327752jpa6503_16[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) တစ်ဦး compulsive စကေး (SCS) ဆောက်လုပ်ထားခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်နှင့် hypersexuality ဆီသို့သဘောထားတွေကိုတိုင်းတာရန်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအအဓိပ္ပာယ် မှစ. compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရှိသူတစ်ဦးချင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံအစည်နှင့်စွဲလမ်းနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲမူလကိုမဆိုအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များ၏, ထိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထုတ်သရုပ်ဆောင်အကြောင်းကို overexcited ဖြစ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ SCS နှင့်အညီ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ထားတဲ့အလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးအများနှင့်အလိုဆန္ဒများနှင့်အတူသာအာရုံစိုနေကြသည်ဖို့ဒီဂရီအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်; နှင့်မသက်ဆိုင်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များဤခံစားချက်များကိုလေ့ကျင့်တွေအကြောင်းနှောငျ့အယှ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေး, ခံစားခကျြခွငျးငှါအလိုရှိ, အပြုအမူသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive မြင့်မားဖြစ်ဟုဆိုသည်နိုင်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည်ဟု Hyper-လိင်နှင့်အတူသာအာရုံစိုနေသောအလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏ပျံ့နှံ့မှုအပေါ်လေ့လာရေးနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်အချက်များအများအားဖြင့်နိုင်ဂျီးရီးယား (က Black ပြင်ပကောက်ယူခဲ့ကြ 1998 အနက်ရောင်, DW (1998) ။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ လက်တွေ့စိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူကျန်းမာရေးဂျာနယ်, 4, 219-229 ။ [Google Scholar]; Chaney & Burns-Wortham, 2015 Chaney, အမတ် & Burns-Wortham, CM (2015) ။ လိင်တူချစ်သူတွေနဲ့လိင်နှစ်မျိုးစလုံးယောက်ျားတွေမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်နိုင်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့အနေဖြင့်ထွက်ပေါ်လာခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုစစ်ဆေးခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 22(1), 71-88 ။[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]; Grov, Parsons, & Bimbi, 2010 Grov, C တို့, Parsons, JT, & Bimbi, DS (2010) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်လိင်တူချစ်သူနှင့်လိင်နှစ်မျိုးလုံးယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 39, 940–949.10.1007/s10508-009-9483-9[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; တောရက်စ်၊ 2007 Torres, HL, & Gore-Felton, C (2007) ။ compulsivity, ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထီးကျန်: အထီးကျန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်မော်ဒယ် (LSRM) ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 14(1), 63–75. doi:10.1080/10720160601150147[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]) ။ ထိုအစောပိုငျးကလေ့လာမှုများအများစုဟာ (တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ, လိင်တူဆက်ဆံ, HIV ပိုးအပြုသဘောယောက်ျားမိန်းမတို့အပေါ် Grov et al ဖြစ်ကြသည်။ , 2010 Grov, C တို့, Parsons, JT, & Bimbi, DS (2010) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်လိင်တူချစ်သူနှင့်လိင်နှစ်မျိုးလုံးယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 39, 940–949.10.1007/s10508-009-9483-9[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; တောရက်စ်၊ 2007 Torres, HL, & Gore-Felton, C (2007) ။ compulsivity, ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထီးကျန်: အထီးကျန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်မော်ဒယ် (LSRM) ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 14(1), 63–75. doi:10.1080/10720160601150147[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]), အကြီးအကျယ်လျစ်လျူရှုအလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေအတူ။ နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်အလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုအထူးသဖြင့်အများအပြားမစင်ကြယ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-related လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ထိတွေ့ခံရမည့်အန္တရာယ်မှာသူတို့ကိုထားရသော unsupervised အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကြီးထွားလာလမ်းကြောင်းသစ်၏အမြင်တွင်, ထို့ကြောင့်အချိန်မီဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်မရှိခြင်းသို့မဟုတ်မိဘများအနေဖြင့်လုံလောက်မှုမရှိအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအထီးကျန်ခံစားခကျြမြားစှာကိုအလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေ predispose; အရှင်ကွဲပြားခြားနားသောလူမှုကျင့်ဆိုးများ၏အန္တရာယ်မှာသူတို့ကိုချပြီး။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ဖို့အချက်များခန့်မှန်းတတ်နိုင်သမျှအထီးကျန်အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်ခံစားမှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုကိုအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမြင့်မားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုပြင်းထန်စွာအစီရင်ခံခဲ့သည် (Kalichman & Cain, 2004 Kalichman, SC, & Cain, D. (2004) ။ လိင်ဆိုင်ရာကူးစက်နိုင်သည့်အညွှန်းကိန်းများနှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောဆေးခန်းမှဝန်ဆောင်မှုများကိုအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားတွင်မြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိသောလိင်အလေ့အကျင့်များအကြားဆက်နွယ်မှု။ လိင်သုတေသနများ၏ဂျာနယ်, 41(3), 235-241.10.1080 / 00224490409552231[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]), စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, စိတ်ဓါတ်များမမှန်ခြင်းနှင့် Impulse control disorders (Grant & Steinberg, 2005 Grant, JE, & Steinberg, MA (2005) ။ မသင်မနေရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစား။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 12, 235-244.10.1080 / 10720160500203856[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]; Raymond, Coleman, & Miner, 2003 ရေမွန်, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား, Coleman, အီး, & Miner, MH (2003) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ comorbidity နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် compulsive / ထကြွလွယ်သောစရိုက်များ။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 44, 370–380.10.1016/S0010-440X(03)00110-X[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]); ကာကွယ်မှုမရှိသောလိင်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ လိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များတိုးများလာခြင်းတို့သည်အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီနှင့်အခြားလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်သည် (Dodge, Reece, Cole, & Sandfort) 2004 Dodge, ခ, Reece, M. , Cole, AL, & Sandfort, TGM (2004) လိင်ကွဲကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 41(4), 343-350.10.1080 / 00224490409552241[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Grov et al ။ , 2010 Grov, C တို့, Parsons, JT, & Bimbi, DS (2010) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်လိင်တူချစ်သူနှင့်လိင်နှစ်မျိုးလုံးယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 39, 940–949.10.1007/s10508-009-9483-9[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Kalichman & Rompa, 2001 Kalichman, SC, & Rompa, ((2001) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုအတိုင်းအတာ - အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးရှိသူများနှင့်နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အသုံးပြုမှု။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်, 76, 379–395.10.1207/S15327752JPA7603_02[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Reece, Plate, & Daughtry, 2001 Reece, အမ်, ပြား, PL, & Daughtry, အမ် (2001) ။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီကာကွယ်ရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း - ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး၏ဘက်ပေါင်းစုံမဟာဗျူဟာလိုအပ်သည်။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 8, 157-167 ။[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]) ။ အခြားသုတေသီများကလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းကြောင့်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာပconflictိပက္ခများနှင့်စိတ်သောကရောက်မှုများ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြressနာများနှင့်အလုပ်တာ ၀ န်များကိုရှောင်ရှားခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည် (Muench & Parsons, 2004 Muench, အက်ဖ်, & Parsons, JT (2004) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့် HIV: ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း။ focus, 19, 1-4 ။[PubMed], [Google Scholar]) ။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်အလယ်တန်းကျောင်းတွင်လူဦးရေအတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏ဖြစ်နိုင်ခြေခန့်မှန်းအဖြစ်အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အထီးကျန်ခံစားချက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအလွန်သက်ဆိုင်ရာသောဖျောပွလေ့လာမှုများအနေဖြင့်သတိပြုပါရန်ထို့ကြောင့်အရေးကြီးပါသည်။
အင်တာနက်အစွန်းရောက်အသုံးပြုမှုကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမှစွဲလမ်းနေတဲ့ပုံစံအဖြစ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမစံချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်သို့သော်လူငယ် (အင်တာနက်စွဲလမ်း၏အယူအဆမှရှိသေးပေမယ့်1998 လူငယ်တို့, KS (1998) ။ ပိုက်ကွန်ထဲမှာဖမ်းမိ: ဘယ်လိုအင်တာနက်စွဲလမ်း၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုအသိအမှတ်မပြုရန် - နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်အနိုင်ရမဟာဗျူဟာ။ KS လူငယ် (Ed က။ ), 605 တတိယရိပ်သာလမ်း (စစ။ 10158-0012 ။ 248) ၌တည်၏။ နယူးယောက်, NY: Wiley ။ [Google Scholar]) မူးယစ်ဆေး intoxicating ၏အသုံးပြုမှုကိုပါဝင်ပတ်သက်နေပါဘူးတစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်အင်တာနက်စွဲသတ်မှတ်။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့တစ်ဦးချင်း၏နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများထိခိုက်အင်တာနက်အနေနဲ့အလွန်အကျွံနှင့် irrepressible အသုံးပြုမှုအဖြစ်အင်တာနက်စွဲသတ်မှတ်။ အင်တာနက်ကအလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေအွန်လိုင်း chatting, ဂိမ်းများနှင့်ဆွေးနွေးမှုဖိုရမ်များအမျိုးမျိုးပုံစံများနှင့်အတူအချိန်လွန်သွားစွဲ။ ထိုအကျင့်ကိုကျင့်သင်တန်းမှာတော့သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြောင်းကြားနိုင်ကြောင်းလိင်-related စိတ်ကူးများနှင့်ထိတွေ့လျက်ရှိသည်။
တည်ဆဲလေ့လာမှုများအလယ်တန်းကျောင်းတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားအင်တာနက်စွဲလမ်း၏မြင့်မားသောပျံ့နှံ့ (ဘရူနို et al ရှိကွောငျးညွှန်ပြ။ , 2014 Bruno, အေ, Scimeca, G. အ, Cava, အယ်လ်, Pandolfo, G. အ, Zoccali, RA, & Muscatello, MRA (2014) ။ အီတလီတောင်ပိုင်းအထက်တန်းကျောင်းသားများ၏နမူနာတွင်အင်တာနက်စွဲခြင်းပျံ့နှံ့ခြင်း။ စိတ်ကျန်းမာရေးစွဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 12, 708–715.10.1007/s11469-014-9497-y[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Sasmaz et al ။ , 2013 Sasmaz, T. , Oner, S. , Kurt, OA, Yapici, G. , Yacizi, AE, Bugdayci, R. , & Sis, M. (2013) ။ အထက်တန်းကျောင်းသားများ၏အင်တာနက်စွဲခြင်း၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အန္တရာယ်အချက်များ။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဥရောပဂျာနယ်, 24(1), 15-20 ။[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ ယုံမှားစရာမရှိ, အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းကိုအမျိုးမျိုးသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကျောင်းသားများအတွက်အလွန်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ရင့်ကျက်သို့မဟုတ်ကြုံတွေ့လမ်းညွှန်များအနေဖြင့်အဘယ်သူမျှမစောင့်ကြည့်ရေးသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုရှိလျှင်သို့သော်အဲဒါကိုစွဲလမ်းအထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေပေါ်လှတဲ့အကျိုးဆက်များရှိနိုငျတယျ။ ဒီပြောဆိုချက်, Griffith က (ကိုထောကျပံ့ဖို့2001 Griffith, MD (2001) ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်: အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲလမ်းများအတွက်တိုင်းထွာခြင်းနှင့်ဆိုလို။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်။ , 38, 333-352.10.1080 / 00224490109552104[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]ဒါဟာအာရုံကြောရောဂါများ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်အယှက်များနှင့် relational ရောဂါဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ကတည်းက) ကျောင်းသားများကို '' ဘဝအသက်တာ၌အချက်တစ်ခုအဖြစ်အင်တာနက်စွဲလမ်းရှင်းပြသည်။ ဒါ့အပြင် Xianhua et al ။ (2013 Xianhua, W. , Xinguang, C, Juan, H. , Heng, M. , Jiaghong, L. , Liesl, N. , & Hanrong, W. (2013) ။ Wuhan, China ရှိဆယ်ကျော်သက်များကြားအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုပျံ့နှံ့မှုနှင့်အချက်များ - မိဘနှင့်သက်ဆိုင်သောသက်ဆိုင်မှုနှင့် hyperactivity-impulsivity ။ PLoS တစ်ခုမှာ, 8(4), e61782 ။[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုတဲ့သူကျောင်းသားများအတွက် hyperactivity-Impulse အတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့မိဘကြားဆက်ဆံရေးအင်တာနက်စွဲလမ်း၏အန္တရာယ်များကိုတစ်ဦးက Moderator အဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးအအလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေများကအင်တာနက်ကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှရလဒ်အဖြစ်လျစ်လျူရှုမရနိုငျ; နှင့်ဤသူတို့၏ယုံကြည်ချက်များ, လူ့လိင်၏တိမ်းညွတ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။
အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအပြင်၊ ကြီးထွားလာနေသောကလေးသူငယ်တစ် ဦး တည်း၌အထီးကျန်ခြင်းသည်သူသို့မဟုတ်သူမအားလိင်ဆိုင်ရာဖော်ပြချက်များကဲ့သို့အချို့သောအပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်ပြီးတရားမဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်အလွယ်တကူကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ အထီးကျန်သည်ဟုခံစားရခြင်းသည်တစ် ဦး တစ်ယောက်သည်သူသို့မဟုတ်သူမမည်သူနှင့်မရင်းနှီးတော့ဟုခံစားရသည့်လူမှုရေးသီးခြားပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အထီးကျန်သည်ဟုခံစားရခြင်းသည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူမှုရေးပြinteractionနာများနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုအစီရင်ခံရသည် (Frye-Cox & Hesse, 2013 Frye-Cox, NE, & Hesse, CR (၂၀၁၃) ။ Alexithymia နှင့်အိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေး - အထီးကျန်ခြင်းနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်သွယ်မှု၏ကြားခံအခန်းကဏ္ roles ။ မိသားစုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 27(2), 203-211.10.1037 / a0031961[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ တစ်ဦးတည်းဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်အထီးကျန်၏ခံစားချက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ပတျသကျ၏အန္တရာယ်မှာအချို့သောအလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေသွင်းထားစေခြင်းငှါ,; ဖြစ်ကောင်း, အထီးကျန်ဆန်၏ခံစားခကျြဖို့စိတျပိုငျးဆိုငျရာစညျးမဉျြးအဖြစ်။ တနည်းအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမလှူအထီးကျန်၏ခံစားချက်တစ်ခုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းယန္တရားအဖြစ်အသုံးချနိုင်ပါသည်။ အနည်းငယ်လေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှခန့်မှန်းအချက်အဖြစ်အထီးကျန်အသိစုံစမ်းစစ်ဆေးပါပြီ။ ဥပမာ, တောရက်စ်နှင့်ဂိုး-Felton (2007 Torres, HL, & Gore-Felton, C (2007) ။ compulsivity, ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထီးကျန်: အထီးကျန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်မော်ဒယ် (LSRM) ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 14(1), 63–75. doi:10.1080/10720160601150147[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]) အထီးကျန်ခံစားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အပြုအမူနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအထီးကျန်ခံစားရသူတစ်ဦးအလယ်တန်းကျောင်းကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အပြုအမူနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမြားတှငျပါဝငျခွငျး၏အန္တရာယ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြံပြု; နှင့်လိင်အန္တရာယ်အပြုအမူများ၏အမျိုးမျိုးသောပုံစံများမြားတှငျပါဝငျခွငျးတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။ Chaney နှင့်ဘန်း-Wortham (2015 Chaney, အမတ် & Burns-Wortham, CM (2015) ။ လိင်တူချစ်သူတွေနဲ့လိင်နှစ်မျိုးစလုံးယောက်ျားတွေမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်နိုင်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့အနေဖြင့်ထွက်ပေါ်လာခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုစစ်ဆေးခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 22(1), 71-88 ။[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]) လည်းမိခင်နှင့် Self-လေးစားရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၏ Non-ထုတ်ဖော်နှင့်အတူအထီးကျန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းအကြောင်းကြားခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဆုံးအဖြတ်အတွက်အထီးကျန်၏ဆက်စပ်မှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive တစ်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအပြုအမူဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျားမခြားနားချက်ကိုနားလည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမလှူဖို့ပိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်သောလိင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ကူညီလိမ့်မည်။ ဖြစ်နိုင်သည်, ဒီတစ်ရောဂါနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှကျား-related ကုသမှုချဉ်းကပ်ဘို့နောက်ထပ်အကူအညီအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏ pathophysiology အခြေခံပေါ်မှာသုတေသီများအလင်းပါလိမ့်မယ်။ အလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်အတူဆက်စပ်ဖွယ်ရှိလူဦးရေအချိုးအစား variable တွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အတွက်ကျား, မများနှင့်လူတန်းစားအဆင့်ကိုကွဲပြားခြားနားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ Ayodele နှင့် Akindele-အော်စကာ (2015 Ayodele, KO, & Akindele-Oscar, AB (2015) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများ - ကျား၊ ပညာရေး, လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အပြုအမူသိပ္ပံဗြိတိန်ဂျာနယ်, 6(1), 50-60 ။[Crossref], [Google Scholar]) အမျိုးသမီးမြီးကောင်ပေါက်သူတို့ရဲ့အထီးများထက်ပိုမိုမြင့်မား relational အတွက်အဆက်မပြတ်အစီရင်ခံကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အလားတူပင် McKeague (2014 McKeague, EL (2014) ။ လိင်စွဲလမ်းနှင့်အတူအမျိုးသမီးတွေကုသမှုအတွက်အကြံပြုချက်များအကြောင်းကြားဖို့အသုံးပြုကျားခြားနားချက်များ၏ themes များပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေတဲ့စာပေပြန်လည်သုံးသပ်: အမျိုးသမီးလိင်စှဲလမျးသူကွာခြား။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 21(3), 203-224.10.1080 / 10720162.2014.931266[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]) အမျိုးသမီးရဲ့လိင်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုပိုပြီး relationally လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။ ဤသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အတွက်ကျားမမညီမျှမှုရှိဖြစ်နိုင်ပါတယ်စဉ်အမျိုးသမီးအမျိုးသားများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲပြကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဤမတူဘဲ, Dodge et al ။ (2004 Dodge, ခ, Reece, M. , Cole, AL, & Sandfort, TGM (2004) လိင်ကွဲကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 41(4), 343-350.10.1080 / 00224490409552241[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) မိန်းမတို့အဘို့ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အပေါ်ယောက်ျားတို့အတွက်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားကြိုတင်လေ့လာမှုများကျားခြားနားချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ရှိကြောင်း, သို့သော်ပြသခဲ့ကြသည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလိင်ပိုင်း compulsive အတွက်ကျား, မများနှင့်လူတန်းစားအဆင့်ကိုကွဲပြားခြားနားမှုဆနျးစစျနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်အလယ်တန်းကျောင်းသားအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အတွက်အထီးကျန်နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း၏ပံ့ပိုးမှုများကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤလေ့လာမှုသည်ကဏ္crossပေါင်းစုံချဉ်းကပ်မှုပုံစံကိုကျင့် သုံး၍ လက်တွေ့ကျကျသုတေသနဒီဇိုင်းကိုအသုံးချခဲ့သည်။ သီးခြားလွတ်လပ်သောကိန်းရှင်များသည်ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှု၊ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်အထီးကျန်ဆန်မှုသဘောတရားများဖြစ်ပြီးမှီခိုနေသည့် variable သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျား / မမကိုအဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ အဆင့်သုံးဆင့် (SSSI, SSSII & SSSIII)၊ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်အထီးကျန်မှုခံစားမှုကိုကြားကာလအတိုင်းအတာဖြင့်တိုင်းတာသည်။
နိုင်ဂျီးရီးယား၊ အိုယိုပြည်နယ်မက်ဘရစ်ပိုလစ်ရှိအလယ်တန်းကျောင်း (၄) ကျောင်းမှရွေးချယ်ထားသောကျောင်းသူကျောင်းသား (၃၁၁) ဦး ၏အဆင်ပြေသည့်နမူနာတွင်ဤလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ နမူနာတွင် I, II နှင့် III အတန်းများရှိ Senior Secondary School (SSS) ကျောင်းသားများပါဝင်သည်။ ကျောင်းသား ၃၁၁ ဦး အနက် ၁၄၀ (၄၅%) သည်အမျိုးသားများဖြစ်ကြပြီး ၁၇၁ (၅၅%) သည်အသက် ၁၃ နှစ်မှ ၂၁ နှစ်အတွင်းအမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်။M = 15.61, SD က = 1.63) ။ ကျောင်းသားများ၏ဘာသာရေးဆိုင်ရာဖြန့်ဝေမှုများက ၂၁၃ (၆၈.၅%) သည်ခရစ်ယာန်များဖြစ်ကြောင်း၊ ၉၃ (၂၉.၉%) မှာမူဆလင်များဖြစ်ကြပြီး ၅ (၁.၆%) သည်အစဉ်အလာအရဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းကြသည်။ အတန်းအဆင့်ကဖော်ပြသည်မှာ ၁၀၀ (၃၂.၂%) သည် SSSI တွင်ဖြစ်ပြီး ၇၅ (၂၄.၁%) သည် SSSII တွင်ရှိပြီး ၁၃၆ (၄၃.၇%) သည် SSS III တွင်ရှိသည်။
ဒေတာကိုလေ့လာမှုအတွက်အကျိုးစီးပွား variable တွေကိုတိုင်းတာအထက်ပါလူဦးရေဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အောက်ပါယုံကြည်စိတ်ချရသောအကြေးခွံများပါဝင်သည်တစ်ခုစနစ်တကျမေးခွန်းလွှာသုံးပြီးစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive Kalichman နှင့် Rompa အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအဆိုပါ 10-item ကိုလိင် compulsive စကေး (SCS) (၏မွေးစားမှတဆင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်1995 Kalichman, SC, & Rompa, D. (1995) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့် compulsivity စကေး: ယုံကြည်စိတ်ချရ, တရားဝင်မှုနှင့် HIV အန္တရာယ်အပြုအမူကိုခန့်မှန်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်, 65, 586–601.10.1207/s15327752jpa6503_16[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) နှင့်ဒီအလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်နှင့်ရမ္မက်ဆီသို့သဘောထားတွေကိုအကဲဖြတ်ဆီသို့ဦးတည်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ အတိုင်းအတာအပေါ်တုံ့ပြန်ချက် '' ငါ့ကိုမကြိုက်ဘူး '' ကနေ '' ငါကဲ့သို့သောအလွန်အများကြီး '' အထိတစ်ဦး 5-အမှတ် Likert-type အမျိုးအစားစကေးအပေါ်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အတိုင်းအတာအပေါ်အမြင့်ရမှတ်တုံ့ပြန်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏ကြီးမြတ်သောဘွဲ့ဖော်ပြသည်။ ပို. အရေးကြီးသည်, SCS ထိုကဲ့သို့သော hypersexuality ၏အကဲဖြတ်နှင့် ပတ်သက်. လိင်ကွဲများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး, HIV ပိုးအပြုသဘောယောက်ျားနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသား (Kalichman, ဂျွန်ဆင်, Adair, et al အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလူဦးရေအတွက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်တရားဝင်မှုရှိသည်ဖို့သတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ , 1994 Kalichman, SC, Adair, V. , Rompa,,, Multhauf, K. , Johnson, ဂျေ, & ကယ်လီ, ဂျေ (1994) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်း - လိင်မှုကိစ္စတက်ကြွသောအမျိုးသားများအကြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အေအိုင်ဒီအက်စ်အန္တရာယ်အပြုအမူကိုခန့်မှန်းခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်, 62, 385–397.10.1207/s15327752jpa6203_1[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Grov et al ။ , 2010 Grov, C တို့, Parsons, JT, & Bimbi, DS (2010) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်လိင်တူချစ်သူနှင့်လိင်နှစ်မျိုးလုံးယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 39, 940–949.10.1007/s10508-009-9483-9[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ Dodge et al ။ (2004 Dodge, ခ, Reece, M. , Cole, AL, & Sandfort, TGM (2004) လိင်ကွဲကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 41(4), 343-350.10.1080 / 00224490409552241[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ကို SCS ၏ဆောက်လုပ်ရေးတရားဝင်မှုအစီရင်ခံ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်ကွဲကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ဦးနမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အရေအတွက်၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူစကေးသက်ဆိုင်သောအားဖွငျ့၎င်းငျး, နှင့်သိသိသာသာဆက်ဆံရေးရယူခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့လက်ရှိလေ့လာမှုမှာ .89 ၏ alpha ယုံကြည်စိတ်ချရကိန်းကဖော်ပြခဲ့သည်။
အထီးထီးနေခြင်း စယ်, Peplau နှင့်ဖာဂူဆန်ကတီထွင် 20-item ကို UCLA ရဲ့အထီးကျန်ခြင်းစကေး (အားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်1978 စယ်, D. , Peplau, LA, & ဖာဂူဆန်, ML (1978) ။ အထီးကျန်တဲ့အတိုင်းအတာဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်, 42, 290–294.10.1207/s15327752jpa4203_11[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]); အရာအထီးကျန်နှင့်လူမှုရေးအထီးကျန်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ခံစားချက်တွေကိုတိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူ 'ငါမကြာခဏဤနည်းခံစားရပါတယ်' ရန် '' ငါသည်ဤလမ်းခံစားရဘယ်တော့မှ '' ကနေအထိတစ်ဦး 5-အမှတ် Likert စကေးအပေါ်ညွှန်ပြရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။ အတိုင်းအတာအပေါ်အမြင့်ရမှတ်တုံ့ပြန်အတွက်အထီးကျန်ကြီးမြတ်သောဘွဲ့ဖော်ပြသည်။ စယ် (1996 စယ်, ဃ (1996) ။ UCLA ရဲ့အထီးကျန်စကေး (ဗားရှင်း 3): ယုံကြည်စိတ်ချရသော, တရားဝင်မှုနှင့်အချက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်, 66, 20–40.10.1207/s15327752jpa6601_2[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) .89 ထံမှ .94 အထိကိန်းနှင့် .73 ၏စမ်းသပ်မှု-retest ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အတူပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လက်ရှိလေ့လာမှုမှာ .92 ၏ alpha ယုံကြည်စိတ်ချရကိန်းကဖော်ပြခဲ့သည်။
အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှု (လူငယ်ကတီထွင် 20 ပစ္စည်းများလူငယ်ရဲ့အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်း (YIAT20) ကအကဲဖြတ်ခဲ့သည်1998 လူငယ်တို့, KS (1998) ။ ပိုက်ကွန်ထဲမှာဖမ်းမိ: ဘယ်လိုအင်တာနက်စွဲလမ်း၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုအသိအမှတ်မပြုရန် - နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်အနိုင်ရမဟာဗျူဟာ။ KS လူငယ် (Ed က။ ), 605 တတိယရိပ်သာလမ်း (စစ။ 10158-0012 ။ 248) ၌တည်၏။ နယူးယောက်, NY: Wiley ။ [Google Scholar]) ။ ဖြေဆိုသူများ၏အင်တာနက်အသုံးပြုမှုသည်သူတို့၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များ၊ လူမှုရေးဘဝ၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား၊ အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ခံစားမှုများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာကိုစကေးမှအကဲဖြတ်သည် (Frangos, Frangos, & Sotiropoulos, 2012 Frangos, CC, Frangos, CC, & Sotiropoulos, ဗြဲ (၂၀၁၂) ။ ငယ်ရွယ်ရဲ့အင်တာနက်စွဲလမ်းစမ်းသပ်မှုများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရ၏ Meta-analysis သည်။ အင်ဂျင်နီယာအပေါ်ကမ္ဘာ့ကွန်ဂရက်၏ဆောင်ရွက်ချက်များ, Vol ဗြဲဇူလိုင်လ 4-6, လန်ဒန်: WCE ။ [Google Scholar]) ။ အတိုင်းအတာအပေါ်တုံ့ပြန်ချက် '' ရှားပါးသော '' ကနေ '' ကိုအမြဲတမ်း '' အထိတစ်ဦး 5-အမှတ် Likert-type အမျိုးအစားစကေးအပေါ်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အတိုင်းအတာအပေါ်အမြင့်ရမှတ်တုံ့ပြန်အတွက်အင်တာနက်စွဲလမ်း၏ကြီးမြတ်သောဘွဲ့ဖော်ပြသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့ .73 တစ်ခု alpha ယုံကြည်စိတ်ချရကိန်းရရှိခဲ့သည်။
ဒေတာစုဆောင်းမှုအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာထည့်သွင်းစဉ်းစားသေချာစေရန်အလို့ငှာတစ်ဦးကျင့်ဝတ်လျှောက်လွှာရက်စွဲများကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့်တွေ့ဆုံအားပေးပြီးမှရာကျောင်းများ '' Ethical ကော်မတီများအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်နှင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းအုပ်နောက်ထပ်သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များ၏အကြောင်းကြားခဲ့ကြသည်။ မေးခွန်းကသူတို့အမျိုးမျိုးသောအတန်းထဲတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှအုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့ကြသည်။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုလေ့လာမှုနှင့်အညီအမျှပေးအပ်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်နှင့် ပတ်သက်. အသိပေးခံခဲ့ရသည်။ အဘယ်သူမျှမလျော်ကြေးငွေလေ့လာမှုမှာပါဝင်ဘို့ကျောင်းသားများအားပေးပြီးမှခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများနှင့်အတူစည်းဝေး၏အချက်မှာ, ကျနော်တို့ကသူတို့အမည်များကိုမေးခွန်းပြီးပါကအတွက်မလိုအပ်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်ပေးထားသောအချက်အလက်တွေကိုသာသုတေသနရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းအလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ 400 မေးခွန်းဖြန့်ဝေမှုနှင့်အတူ 364 311 စနစ်တကျပြီးစီးခဲ့သည့်ထဲကသင်တန်းသားများအနေဖြင့်လုံးဝထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။ ဒေတာလေ့လာမှုအတွက်လေ့လာဆန်းစစ်ဘို့ဤအအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အသုံးပြုသောမေးခွန်း၏အမှန်တကယ်အရေအတွက်ကို 77.75% ၏တုန့်ပြန်မှုနှုန်းကိုညွှန်ပြ; စနစ်တကျပြီးစီးကြသည်မဟုတ်ကြောင်း 53 စွန့်ပစ်တော်မူပြီးမှ။
စုဆောင်းဒေတာကို IBM က SPSS 24 ဗားရှင်းကို အသုံးပြု. လေ့လာဆန်းစစ်အကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ပြရန်နှင့် inferential နှစ်ဦးစလုံးစာရင်းဇယားလေ့လာမှုမှာတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောယုတ်, စံသွေဖည်ခြင်းနှင့်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ဖော်ပြရန်ကိန်းဂဏန်းများဖြေဆိုသူလူဦးရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ bivariate နှင့် hieratical မျိုးစုံဆုတ်ယုတ်၏ Inferential စာရင်းဇယားတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးက bivariate ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Two-မော်ဒယ် hierarchical မျိုးစုံဆုတ်ယုတ်လေ့လာမှုမှာသတ်မှတ်ထား variable ကိုရှင်းပြအတွက်ခန့်မှန်း variable တွေကိုများ၏လွတ်လပ်သောနှင့်ပူးတွဲပံ့ပိုးမှုများကိုစမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည့်နောက်, အားလုံး variable တွေကိုအကြားဆက်ဆံရေးကိုစောငျ့ရှောကျဖို့ကောက်ယူခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအဆင့်မှာအင်တာနက်စွဲလမ်းထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်နှင့်ဒုတိယအဆင့်မှာအထီးကျန်အသိထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်။ စာရင်းအင်းများအဓိပ်ပာယျ၏ .01 နှင့် .05 အဆင့်ဆင့်မှာသိသိသာသာအစီရင်ခံခဲ့သည်။
bivariate ဆက်စပ်မှု၏ရလဒ်များစားပွဲတင် 1 အတွက် variable တွေကို၏ interrelationships အပေါ်လေ့လာဆန်းစစ် (ဖြေဆိုသူအသက်အရွယ်အပြုသဘောလူတန်းစားအဆင့်နှင့်အတူပြောပြတယ်ကြောင်းပြသr = .58; p < .01) နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း (r = .12; p <.01), ဒါပေမယ့်အထီးကျန်နှင့်အတူမထားဘူး (r = -.01; p > .05) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsivity (r = .08; p > .05) ။ အတန်းအဆင့်သည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ (r = .10; p > .05), အထီးကျန်r = .01; p > .05) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsivity (r = .06; p > .05) ။ အထီးကျန်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုr = .32; p <.01) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsivity (r = .47; p <.01) ။ အထီးကျန်ခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည် (r = .38; p <.01) ။
စားပွဲတင် 1 ။ လေ့လာမှုမှာ variable တွေကိုအကြား mean, စံသွေဖည်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှု matrix ကို (N = 311) ။
Two-မော်ဒယ် hierarchical ဆုတ်ယုတ်ရလဒ်များကို
စားပွဲတင်2အတွက် Two-မော်ဒယ် hierarchical မျိုးစုံဆုတ်ယုတ်၏ရလဒ်များပထမဦးဆုံးမော်ဒယ်မှာအင်တာနက်စွဲလမ်းဟာဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်မှသိသိသာသာလှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းပြ F (1, 309) = 88.63, p <.01 နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်အတွက်အပြောင်းအလဲ၏ 22% အဘို့မှတ်။ အထွေထွေအထွေထွေအထွေထွေအထွေထွေအထွေထွေအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်ခြင်းသည်လိင်ဆက်ဆံမှုကို ၂၈% အထိသိသိသာသာတိုးမြှင့်စေခဲ့သည်။ F(2, 308) = 60.47, p <.01 ။ အလားတူပဲဒုတိယပုံစံမှာအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုβ = .39, p <.01) နှင့်အထီးကျန်ခြင်း (β = .26, p <.01) အလယ်တန်းကျောင်းကလေးများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်နိုင်မှုကိုလွတ်လပ်စွာခန့်မှန်းခဲ့သည်။
စားပွဲတင်2။ အလယ်တန်းကျောင်းသားသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ခန့်မှန်း variable တွေကိုအဘို့အ hierarchical ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအနှစ်ချုပ် (N = 311) ။
စားပွဲတင်3များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အတွက်ကျားမကွာခြားချက် t-စမ်းသပ်သုံးပြီးအလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေအကြားစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ကြောင့်အထီးဖြေဆိုသူ (ထိုရှာတွေ့ခဲ့သည်M = 25.28, SD ကို = 10.04) သိသိသာသာသူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsivity (M = 19.96, SD က = 9.37) ။ ရလဒ်အနေဖြင့်အလယ်တန်းကျောင်းကလေးများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုအဆင့်၌ကျား၊ မကွဲပြားမှုရှိကြောင်းဖော်ပြသည် t(309) = 4.82, p = .000 ။
စားပွဲတင်3။ tလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အပေါ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအလယ်တန်းကျောင်းသားသမီးများ၏ -test ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အပေါ်လူတန်းစားအဆင့်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆန်းစစ်ခုနှစ်, ကှဲလှဲတစ်ခုမှာ-လမ်းအားသုံးသပ်ခြင်း (ANOVA) ကောက်ယူခဲ့စားပွဲတင်4အတွက်ရလဒ်တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အပေါ်လူတန်းစားအဆင့်မျှအရေးပါသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြသ F(2, 308) = .58, p = .558 ။ သို့သော်၊ အတန်းအဆင့်၏ဂရပ်ဖစ်တင်ဆက်မှုကိုလေ့လာခြင်းကအလယ်တန်းကျောင်းမှကလေးများသည်အဆင့်မြင့်အတန်းသို့တက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ 1).
စားပွဲတင်4။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အပေါ်လူတန်းစားအဆင့်ဆင့်၏တလမ်း ANOVA ၏အကျဉ်းချုပ်။
ပုံ 1 ။ အလယ်တန်းကျောင်းကလေးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive သူတို့ရဲ့အဆင့်အတန်းတစ်အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Presents ။
ဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုတို့အကြားသိသာထင်ရှားသောတိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအချက်ကအလယ်တန်းကျောင်းကလေးများသည်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုစွဲလမ်းလေလေ၊ သူတို့သည်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများပိုမိုပြုလေလေဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုသည်အလယ်တန်းကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်ကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကျောင်းသားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်းနှင့် hyperactivity တို့အကြားအပြုသဘောဆောင်သောဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းအတည်ပြုထားသောယခင်လေ့လာမှုများနှင့်ကိုက်ညီသည် (Adebayo, Udegbe, & Sunmola, 2006 Adebayo, DO, Udegbe, IB, & Sunmola, AM (2006) ။ ကျား၊ မ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်နိုင်ဂျီးရီးယားလူငယ်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ, 9(6), 742-752.10.1089 / cpb.2006.9.742[Crossref], [PubMed], [Google Scholar]; Xianhua et al ။ , 2013 Xianhua, W. , Xinguang, C, Juan, H. , Heng, M. , Jiaghong, L. , Liesl, N. , & Hanrong, W. (2013) ။ Wuhan, China ရှိဆယ်ကျော်သက်များကြားအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုပျံ့နှံ့မှုနှင့်အချက်များ - မိဘနှင့်သက်ဆိုင်သောသက်ဆိုင်မှုနှင့် hyperactivity-impulsivity ။ PLoS တစ်ခုမှာ, 8(4), e61782 ။[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးအများနှင့်အလိုဆန္ဒများနှင့်အတူသာအာရုံစိုခံများထံမှလည်းဖော်ဆောင်နိုင်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ကျောင်းသားများကိုအတွက်ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်အင်တာနက်စွဲလမ်း၏အန္တရာယ်များ၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ဒါဟာနောက်ထပ်အထီးကျန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အကြားသိသိသာသာတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိကွောငျးကိုဖျောပွခဲ့သညျ။ ဒါကပိုပြီးအလယ်တန်းကျောင်းတွင်ကျောင်းသားများကပိုသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အပြုအမူတွေသူတို့ကို predispose နိုင်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံအစည်နှင့်သာအာရုံစိုနေကြတယ်, အထီးကျန်သို့မဟုတ်အထီးကျန်ခံစားရသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အထီးကျန်ခြင်းအလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ရှင်းပြအတွက်လွတ်လပ်သောအလှူငွေရှိသည်ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်တောရက်စ်နှင့်ဂိုး-Felton (နှင့်အညီဖြစ်ကြောင်း2007 Torres, HL, & Gore-Felton, C (2007) ။ compulsivity, ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထီးကျန်: အထီးကျန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်မော်ဒယ် (LSRM) ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 14(1), 63–75. doi:10.1080/10720160601150147[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]); အဘယ်သူသည်အစောပိုင်းကအထီးကျန်ခံစားမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အပြုအမူအကြားသိသာထင်ရှားသောအသင်းအဖွဲ့အစီရင်ခံခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အားဂရုမစိုက်သို့မဟုတ်ဆင်ယင်မဟုတ်တစ်ဦးတည်းကျန်ကြွင်းသေးသောအလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ထိခိုက်နိုင်ကြောင်းအန္တရာယ်များအပြုအမူတွေကိုထိတွေ့လျက်ရှိသည်။
hierarchical မျိုးစုံဆုတ်ယုတ်၏ရလဒ်များကိုလည်းအထီးကျန်အင်တာနက်စွဲခြင်းနှင့်ခံစားချက်တို့ပူးတွဲဒီလေ့လာမှုမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ခန့်မှန်းကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက် (Chaney နှင့်ဘန်း-Wortham နှင့်အတူ corroborate2015 Chaney, အမတ် & Burns-Wortham, CM (2015) ။ လိင်တူချစ်သူတွေနဲ့လိင်နှစ်မျိုးစလုံးယောက်ျားတွေမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်နိုင်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့အနေဖြင့်ထွက်ပေါ်လာခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုစစ်ဆေးခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 22(1), 71-88 ။[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]) မိခင်နှင့် Self-လေးစားရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၏ Non-ထုတ်ဖော်ကဲ့သို့အခြား variable တွေကိုနှင့်အတူကြောင့်အထီးကျန်စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့သူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, အင်တာနက်စွဲလမ်းပိုမိုမြင့်မားသိသိသာသာရာခိုင်နှုန်းမှတ်တမ်းတင်ရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဤသည်သြဇာကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းအလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေအကြားလူ့လိင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းနှင့်အတွေးအခေါ်များ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ဘယ်လောက်ရှင်းပြသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, အွန်လိုင်းလိင်လှုပ်ရှားမှုများ (OSA) Eleuteri, Tripodi, Petruccelli, ရော့စီနှင့် Simonelli (အစီရင်ခံအဖြစ်2014 Eleuteri, အက်စ်, Tripodi, အက်ဖ်, Petruccelli, ဗြဲ, Rossi, R. , & Simonelli, C. (2014) ။ အွန်လိုင်းလိင်လှုပ်ရှားမှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်မေးခွန်းလွှာများနှင့်အကြေးများ - အနှစ် ၂၀ ကြာလေ့လာမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Cyberpsychology: ဆိုက်ဘာစပေ့အပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနဂျာနယ်, 8(1), ဆောင်းပါး 1 ။ Doi: 10.5817 / CP2014-1-2[Crossref], [Google Scholar]) ဒီလူဦးရေအတွက်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာပါဝငျ; မဟုတ်ဘဲအပြုသဘောဆောင်တဲ့သင်ယူမှုနှင့်အသိပညာ၏မျက်နှာကို ထောက်. ထက်။ သျောလညျး, OSA ယင်း၏အနုတ်လက္ခဏာနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့မွဲနေကြတယ်, တချို့အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောရှုထောငျ့ရှိသည်ဖို့သတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အတွက်ကျားမကွာခြားချက်ရှိ၏။ အထီးအလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အတွက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် Dodge et al နှင့်အတူကိုက်ညီ။ (2004 Dodge, ခ, Reece, M. , Cole, AL, & Sandfort, TGM (2004) လိင်ကွဲကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 41(4), 343-350.10.1080 / 00224490409552241[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ယောက်ျားကပိုလိင် compulsive အပြုအမူများတွင်အမျိုးသမီးများ၏ထက်ဖြစ်ကြောင်း။ ဤသည်မှာကျားမကွာခြားချက်အမျိုးသမီးထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစကားရပ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အထီးဆီသို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေါ်လာသောလူမှုယဉ်ကျေးမှုအချက်များမှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းအလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive သတင်းပို့လမျး၌လူတန်းစားအဆင့်ကွဲပြားခြားနားမှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ သိသိသာသာခြားနားချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၌တွေ့မရှိပါ။ သို့သော်အတန်းထဲတွင်ကျောင်းသားများ '' တိုးတက်မှုအဖြစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံအစည်နှင့်ပိုပြီးအာရုံမစိုဖြစ်လာ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှိကွောငျးတစ်ခုအရိပ်အယောင်ရှိ၏။ ဤသည် (ပယ်ရီ၏အစီရင်ခံစာနှင့်အညီ Accordino ဖြစ်ပြီး, Hewes2007 ပယ်ရီ၊ အမ်၊ အကွိုင်နို၊ ပါလီမန်အမတ် & Hewes, RL (2007) ။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု၊ လိင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကင်းသောခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းတို့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 14(4), 321-335.10.1080 / 10720160701719304[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]) အထက်တန်းစားကျောင်းသားများကိုနိမ့်လူတန်းစားကျောင်းသားများကိုထက်ရှာကြံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုတစ်ခုတိုးလာပါသည်သော။ ဖြစ်နိုင်သည်, ကျောင်းသားများဟာသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ထံမှလေ့လာသင်ယူသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-related သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ရှာဖွေရေးတွင်ပိုမိုတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ဖြစ်လာသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်များအမြင်တွင်အောက်ပါကောက်ချက်များရှေ့ဆက်ထားကြသည်: ပထမဦးစွာသိသိသာသာအထီးကျန်အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အသိ (လွတ်လပ်စွာနှင့်ပူးတွဲ) မြင့်မားတဲ့အလှူငွေမှတ်တမ်းတင်အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အတူအလယ်တန်းကျောင်းသားအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏အဆင့်ကိုရှင်းပြအတွက်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ဒုတိယအချက်မှာအလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေအထီးကျောင်းသားများကို သာ. ကွီးမွတျအဆငျ့မှတ်တမ်းတင်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အစီရင်ခံတင်ပြမှာအဆငျ့ထဲမှာကျားမကွာခြားချက်ရှိပါတယ်။ သျောလညျး, လူတန်းစားအဆင့်ကိုသိသိသာသာကျောင်းသားများကိုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive သြဇာလွှမ်းမိုးမပြုခဲ့သို့သော်ကျောင်းသားများကသူတို့အတန်းထဲတွင်ကြိုတင် get အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အပြုအမူတွေကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံအစည်နှင့်ပိုပြီးအာရုံမစိုဖြစ်မည်အကြောင်းတစ် signal ကိုလည်းမရှိ။
ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုဆယ်ကျော်သက်ကြားတွင်လိင်၏ sensitivity ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရအရေးကြီးသောဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ချောမွေ့မိဘကလေးဆက်သွယ်ရေးအပေါ်အလေးပေးအဖြစ်သားသမီးများ၏လျော်သောပြုစုပျိုးထောင်ဘို့အင်တာနက်ထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံများ (အိမ်မှာနှင့်ကျောင်းများအတွက်နှစ်ဦးစလုံး) နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးနှင့်ကာကွယ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုရှိသင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ ကျနော်တို့ကျောင်းမှာပတ်ဝန်းကျင်အလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ၎င်းတို့၏လိင်-related စိန်ခေါ်မှုများကိုဆွေးနွေးရန်အတွက်လုံလောက်သောဖော်ရွေစေသင့်ကြောင်းအကြံပြုပါသည်။ ဒါ့အပြင်ကျောင်းက-based အစီအစဉ်များကိုသူတို့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးအကျော်လွှားနိုင်ပုံကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများနှင့်စွန့်စားမှုအချက်များပေါ်တွင်အားလုံးအဆင့်ဆင့်မှာအလယ်တန်းကျောင်းကလေးတွေပညာပေးအဖြစ်အပေါ်အာရုံနှင့်အတူအကောင်အထည်ဖော်ရပါမည်။ အိမ်မှာမိဘများလိင်နှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်အန္တရာယ်အချက်များအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှဖြေရှင်းမဟာဗျူဟာများကဲ့သို့အထိခိုက်မခံတဲ့ကိစ္စများမှာသူတို့ကိုနှင့်သူတို့၏ရပ်ကွက်များအကြားပွင့်လင်းဆွေးနွေးမှုများအတွက်အချိန်ဖန်တီးသင့်ပါတယ်။ အထူးသမိဘများကသူတို့ရပ်ကွက်များအတွက်လုံလောက်သောအချိန်ပေးနဲ့ off နှင့်ကျောင်းများအတွက်၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ကျောင်းမှစိတ်ပညာရှင်သို့မဟုတ်တိုင်ပင်မှူးမတ်များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်အတူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
စာရေးသူက '' အလှူငွေ
AML ပဋိသန္ဓေနှင့်လေ့လာမှုဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ AML နည်းလမ်းများနှင့်ရလဒ်များကိုကဏ္ဍများကိုရေးသားခဲ့သည်နှင့်မိတ်ဆက်နှင့်ဆွေးနွေးမှုမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ESI နိဒါန်းနှင့်ဆွေးနွေးမှုမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။
Abiodun Musbau Lawal စိတ်ပညာဌာနမှကထိကတဦးဖြစ်သောဖက်ဒရယ်တက္ကသိုလ်, Oye-Ekiti, Ekiti ပြည်နယ်, နိုင်ဂျီးရီးယားဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သုတေသနအကျိုးစီးပွား Self-ဖွံ့ဖြိုးရေး, မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ကိစ္စများ, HIV / AIDS ရောဂါ, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအာရုံစိုက်ပါ။
Erhabor တနင်္ဂနွေ Idemudia လူ့နှင့်လူမှုရေးသိပ္ပံ, မြောက်အမေရိကအဘိဓါန် West တက္ကသိုလ်, Mafikeng ကျောင်းပရဝုဏ်, Mmabatho, တောင်အာဖရိက၏ဌာနတစ်ခုအပြည့်အဝသုတေသနပါမောက္ခဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သုတေသနဒေသများစိတ်ဒဏ်ရာ, အားနည်းချက်အုပ်စုများအကျဉ်းထောင်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာအာရုံစိုက်ပါ။
အဆိုပါစာရေးဆရာလေ့လာမှုများအတွက်မေးခွန်းပြီးပါကအတွက်ကျောင်းသားများကပေးတဲ့အကူအညီကိုအသိအမှတျပွု။ ဒါ့အပြင်လေ့လာချက်များအတွက် setting များအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့အလယ်တန်းကျောင်းများ၏ခေါင်းဆောင်မှုဒေတာစုဆောင်းခြင်းများအတွက်လေထုလက်ခံနိုင်ဖွယ်အောင်ဘို့တန်ဖိုးထားသည်။
Adebayo, DO, Udegbe, IB, & Sunmola, AM (2006) ။ ကျား၊ မ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်နိုင်ဂျီးရီးယားလူငယ်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ, 9(6), 742-752.10.1089 / cpb.2006.9.742
Ayodele, KO, & Akindele-Oscar, AB (2015) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများ - ကျား၊ ပညာရေး, လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အပြုအမူသိပ္ပံဗြိတိန်ဂျာနယ်, 6(1), 50-60 ။
အနက်ရောင်, DW (1998) ။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ လက်တွေ့စိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူကျန်းမာရေးဂျာနယ်, 4, 219-229 ။
Bruno, အေ, Scimeca, G. အ, Cava, အယ်လ်, Pandolfo, G. အ, Zoccali, RA, & Muscatello, MRA (2014) ။ အီတလီတောင်ပိုင်းအထက်တန်းကျောင်းသားများ၏နမူနာတွင်အင်တာနက်စွဲခြင်းပျံ့နှံ့ခြင်း။ စိတ်ကျန်းမာရေးစွဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 12, 708–715.10.1007/s11469-014-9497-y
Chaney, အမတ် & Burns-Wortham, CM (2015) ။ လိင်တူချစ်သူတွေနဲ့လိင်နှစ်မျိုးစလုံးယောက်ျားတွေမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်နိုင်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့အနေဖြင့်ထွက်ပေါ်လာခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုစစ်ဆေးခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 22(1), 71-88 ။
Dodge, ခ, Reece, M. , Cole, AL, & Sandfort, TGM (2004) လိင်ကွဲကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 41(4), 343-350.10.1080 / 00224490409552241
Eleuteri, အက်စ်, Tripodi, အက်ဖ်, Petruccelli, ဗြဲ, Rossi, R. , & Simonelli, C. (2014) ။ အွန်လိုင်းလိင်လှုပ်ရှားမှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်မေးခွန်းလွှာများနှင့်အကြေးများ - အနှစ် ၂၀ ကြာလေ့လာမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Cyberpsychology: ဆိုက်ဘာစပေ့အပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနဂျာနယ်, 8(1), ဆောင်းပါး 1 ။ Doi: 10.5817 / CP2014-1-2
Frangos, CC, Frangos, CC, & Sotiropoulos, ဗြဲ (၂၀၁၂) ။ ငယ်ရွယ်ရဲ့အင်တာနက်စွဲလမ်းစမ်းသပ်မှုများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရ၏ Meta-analysis သည်။ အင်ဂျင်နီယာအပေါ်ကမ္ဘာ့ကွန်ဂရက်၏ဆောင်ရွက်ချက်များ, Vol ဗြဲဇူလိုင်လ 4-6, လန်ဒန်: WCE ။
Frye-Cox, NE, & Hesse, CR (၂၀၁၃) ။ Alexithymia နှင့်အိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေး - အထီးကျန်ခြင်းနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်သွယ်မှု၏ကြားခံအခန်းကဏ္ roles ။ မိသားစုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 27(2), 203-211.10.1037 / a0031961
Grant, JE, & Steinberg, MA (2005) ။ မသင်မနေရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစား။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 12, 235-244.10.1080 / 10720160500203856
Griffith, MD (2001) ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်: အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲလမ်းများအတွက်တိုင်းထွာခြင်းနှင့်ဆိုလို။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်။ , 38, 333-352.10.1080 / 00224490109552104
Grov, C တို့, Parsons, JT, & Bimbi, DS (2010) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်လိင်တူချစ်သူနှင့်လိင်နှစ်မျိုးလုံးယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 39, 940–949.10.1007/s10508-009-9483-9
Herkov, အမ် (2016) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲဆိုတာဘာလဲ psyche ဗဟို။ ရယူရန်သြဂုတ်လ 10, 2017 မှ https://psychcentral.com/lib/what-is-sexual-addiction/
Kalichman, SC, & Cain, D. (2004) ။ လိင်ဆိုင်ရာကူးစက်နိုင်သည့်အညွှန်းကိန်းများနှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောဆေးခန်းမှဝန်ဆောင်မှုများကိုအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားတွင်မြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိသောလိင်အလေ့အကျင့်များအကြားဆက်နွယ်မှု။ လိင်သုတေသနများ၏ဂျာနယ်, 41(3), 235-241.10.1080 / 00224490409552231
Kalichman, SC, & Rompa, D. (1995) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့် compulsivity စကေး: ယုံကြည်စိတ်ချရ, တရားဝင်မှုနှင့် HIV အန္တရာယ်အပြုအမူကိုခန့်မှန်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်, 65, 586–601.10.1207/s15327752jpa6503_16
Kalichman, SC, & Rompa, ((2001) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုအတိုင်းအတာ - အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးရှိသူများနှင့်နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အသုံးပြုမှု။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်, 76, 379–395.10.1207/S15327752JPA7603_02
Kalichman, SC, Adair, V. , Rompa,,, Multhauf, K. , Johnson, ဂျေ, & ကယ်လီ, ဂျေ (1994) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်း - လိင်မှုကိစ္စတက်ကြွသောအမျိုးသားများအကြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အေအိုင်ဒီအက်စ်အန္တရာယ်အပြုအမူကိုခန့်မှန်းခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်, 62, 385–397.10.1207/s15327752jpa6203_1
McKeague, EL (2014) ။ လိင်စွဲလမ်းနှင့်အတူအမျိုးသမီးတွေကုသမှုအတွက်အကြံပြုချက်များအကြောင်းကြားဖို့အသုံးပြုကျားခြားနားချက်များ၏ themes များပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေတဲ့စာပေပြန်လည်သုံးသပ်: အမျိုးသမီးလိင်စှဲလမျးသူကွာခြား။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 21(3), 203-224.10.1080 / 10720162.2014.931266
Muench, အက်ဖ်, & Parsons, JT (2004) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့် HIV: ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း။ focus, 19, 1-4 ။
ပယ်ရီ၊ အမ်၊ အကွိုင်နို၊ ပါလီမန်အမတ် & Hewes, RL (2007) ။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု၊ လိင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကင်းသောခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းတို့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 14(4), 321-335.10.1080 / 10720160701719304
ရေမွန်, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား, Coleman, အီး, & Miner, MH (2003) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ comorbidity နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် compulsive / ထကြွလွယ်သောစရိုက်များ။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 44, 370–380.10.1016/S0010-440X(03)00110-X
Reece, အမ်, ပြား, PL, & Daughtry, အမ် (2001) ။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီကာကွယ်ရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း - ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး၏ဘက်ပေါင်းစုံမဟာဗျူဟာလိုအပ်သည်။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 8, 157-167 ။
စယ်, ဃ (1996) ။ UCLA ရဲ့အထီးကျန်စကေး (ဗားရှင်း 3): ယုံကြည်စိတ်ချရသော, တရားဝင်မှုနှင့်အချက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်, 66, 20–40.10.1207/s15327752jpa6601_2
စယ်, D. , Peplau, LA, & ဖာဂူဆန်, ML (1978) ။ အထီးကျန်တဲ့အတိုင်းအတာဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်, 42, 290–294.10.1207/s15327752jpa4203_11
Sasmaz, T. , Oner, S. , Kurt, OA, Yapici, G. , Yacizi, AE, Bugdayci, R. , & Sis, M. (2013) ။ အထက်တန်းကျောင်းသားများ၏အင်တာနက်စွဲခြင်း၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အန္တရာယ်အချက်များ။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဥရောပဂျာနယ်, 24(1), 15-20 ။
Torres, HL, & Gore-Felton, C (2007) ။ compulsivity, ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထီးကျန်: အထီးကျန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်မော်ဒယ် (LSRM) ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 14(1), 63–75. doi:10.1080/10720160601150147
Xianhua, W. , Xinguang, C, Juan, H. , Heng, M. , Jiaghong, L. , Liesl, N. , & Hanrong, W. (2013) ။ Wuhan, China ရှိဆယ်ကျော်သက်များကြားအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုပျံ့နှံ့မှုနှင့်အချက်များ - မိဘနှင့်သက်ဆိုင်သောသက်ဆိုင်မှုနှင့် hyperactivity-impulsivity ။ PLoS တစ်ခုမှာ, 8(4), e61782 ။
လူငယ်တို့, KS (1998) ။ ပိုက်ကွန်ထဲမှာဖမ်းမိ: ဘယ်လိုအင်တာနက်စွဲလမ်း၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုအသိအမှတ်မပြုရန် - နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်အနိုင်ရမဟာဗျူဟာ။ KS လူငယ် (Ed က။ ), 605 တတိယရိပ်သာလမ်း (စစ။ 10158-0012 ။ 248) ၌တည်၏။ နယူးယောက်, NY: Wiley ။